LAYAAB+SAWIRRO: Dumarka oo is caddeynta ku Darsaday is cayilin | GURIGA HAWEENKA
Home » MAXAA CUSUB » LAYAAB+SAWIRRO: Dumarka oo is caddeynta ku Darsaday is cayilin
LAYAAB+SAWIRRO: Dumarka oo is caddeynta ku Darsaday is cayilin
Waxaa soo kordhaya dumarka da’da yar ee Suudaan ee u geeriyoonayana xanuunada wadnaha iyo kilyaha sababtuna ay tahay in ay joojiyeen qaadashada kaniinka si lama filaan ah.
“Dumarka waxa ay ka xishoonayaan in ay kaniinada ka iibsadaan farmashiyeyaasha, sababtoo ah waxa ay ka baqayaan in la ceebeysto, sidaasi darteed waxa ay ka iibsadaan dukaamada yaryar” ayay tiri gabadh ardayad ah oo Suudaan ku sugan.
Balse sidaasi oo ay tahay wali dhaqankan la’isku cayilanayo ayaa si xad dhaaf ah usii socda.
Dhanka kale qaadashada kaniinada sharci darada ah ayaa aad ugu badan Suudaan oo bulshadu tahay mid dhawrsoon, sababtuna waxa ay tahay in dadka qamriga caba ama xashiishka ay urtooda isaga baabi’iyaan marka ay bulshada dhexgalayaan.
Ardayda jaamacaha Khartuum ayaa si baahsan u iibsada kaniinka xanuun baabi’iyaha ah ee Tramadol loo yaqaano, kaasi qiimihiisu yahay $1.8 halkii xabbo.
Booliiska ayaa la tacaalaya sidii ay oga hortagi lahaayeen ka ganacsiga sharci darada ah ee dawadan, balse macaashka laga hela oo aad u badan awgiis, ayaa waxbo laga qaban la’yahay.
Previous: Daawo Sawirada: Dhaqtar sida dib-jirta u labista si uu bilaash ugu dabiibo darbi-jiifta Xanuunsan
Next: Duuliso Asli Cabaade oo lasoo xusuusiyay waayo-waayo iyo diyaarad ay ku sigatay in ay duuliso